“McTominay waa ciyaariyahanka ugu fiican Manchester United, taasina aniga ayaa sabab u ah” – Gool FM
(Manchester) 11 Dis 2019. Scott McTominay inuu ayaa wuxuu bandhig fiican ka sameeyay kooxda Manchester United, waana mid ka mid ah sababihii ugu weynaa ee guushii ay Red Devils ka gaartay ​​Sabtidii lasoo dhaafay naadiga Manchester City kulankii Manchester derby.
Tababaraha kooxda Tottenham Hotspur ee Jose Mourinho ayaa xaqiijiyay in qaab ciyaareedka cajiibka ah uu sameynayo haatan laacibka Manchester United ee Scott McTominay inuu isagu sababteedu lahaa.
Jose Mourinho ayaa wuxuu dhinaca kale shaaca ka qaaday in Scott McTominay uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican xilligan ee kooxda Manchester United.
Jose Mourinho ayaa kor u soo qaaday Scott McTominay sanadkii 2017, kaddib markii uu ku adkeystay inuu fursad ka siiyo qorshihiisa kooxda, haatana wuxuu noqday mid ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan Man United.
Jose Mourinho oo shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor ciyaarta caawa ay kooxda Bayern Munich ku wajihi doonaan Champions League, ayaa mid ka mid ah saxafiyiinta wuxuu weydiiyay su’aal aheyd inuusan mudnaanta koowaad siinin xiddigaha da’ayarta ah koox kasta uu macalin ka noqdo.
Su’aasha saxafiga ayaa ka careysiisay Jose Mourinho wuxuuna ku jawaab celiyay:
“Haa, waa muhiim inaad xiiseeyso qeybta da’ayrta, Scott McTominay waa ciyaaryahanka kaliya ee haatan ugu fiican Manchester United”.
“Raphaël Varane waa mid ka mid ah difaacyada ugu fiican adduunka xilligan”.
Jose Mourinho ayaa wuxuu hadalkiisan kala jeedaa inuu fursad siiyay labadan xiddig ee Scott McTominay iyo Raphaël Varane, markii uu joogay kooxaha Real Madrid iyo Man United.